Bhubhisa amawaka e-zombies ku-Don Zombie kunye nobuhle bakhe obukhulu | I-Androidsis
Sinemidlalo emininzi ye-zombie, kodwa zihlala zikhona enye ebonakalayo njengoko isenzeka ngoDon Zombie, enye apho ungashiyi khona ukuma kwe-zombie. Kwaye kukuwe ukuba uhlanga loluntu luyaqhubeka nokuphila kwaye luhle kulo mhlaba, ke yiya kuwo wonke umdlalo wesitayile kunye nomgangatho.
Ngeli bali esele silazi ngokwaneleyo, uDon Zombie uza ngexesha apho abaninzi, emva kokubulala izigidi zeZombi kwimidlalo emininzi, sele bediniwe kukususa abo bahambayo. Nangona uhlala singafumana umfutho owaneleyo wokukhuphela enye dlala kwaye ube nemidlalo elungileyo.
1 Umdlalo onomoya kwaye wenze kakuhle
2 Ukuphucula izixhobo zakho kwiDon Zombie
3 Imikhosi yeZombi
Umdlalo onomoya kwaye wenze kakuhle
Don zombie imele oopopayi abenziwe kwaye loo moya umnyama ulawula kuyo yonke imidlalo esiyidlalayo. Inxalenye yesityholo sokuba nemvakalelo yokuba wedwa emhlabeni kungenxa yengoma yesandi kunye nesandi esingqonge ishumi.
Yongeza kula mathemba okuphelelwa lithemba uthotho lweentshaba, ngaphandle kwezo zombies, ezinje ngezigcawu, ezifana abaphambukeli kwimovie kaRidley Scott, ziya kuphoswa entlokweni yakho ukwenza yonke into ibenzima ngakumbi kwaye ngepeyinti udwebe iindonga ngegazi lakho.
Ayizukuphela kwabo abaphambukeli abatya intloko lBaza kwenza izinto zibe nzima kuwe, kodwa iiZombi, nokuba sele ziqwengiwe, ziya kuzimisa ukuzama ukukrazula olo lusu ungasazinyamekeliyo ngenxa yokuzivalela kwizakhiwo ezahlukileyo phantse yonke imini; yile nto i-apocalypse ye-zombie inayo.
Ukuphucula izixhobo zakho kwiDon Zombie
Kwi-Don Zombie sinokubakho hambani niyokuthenga izixhobo ezahlukileyoNangona sicebisa ukuba ugcine imali ukuze ubambe isixhobo sesibini, kuba nokuba unganyusa amandla wokudubula umpu wakho wokuqala, iyakubiza ingalo nomlenze ukufumana isixhobo sesibini. Kwaye oku kuthetha ukuba uyakufikelela kwinqanaba apho ungadluli khona ngenxa yokufumba kweZombi, abaphambukeli kunye nokunye ...
Akukho kunqongophala kwabaphathi bokugqibela kumdlalo we-zombie, njengolu luhlu lukhulu silwenzile iHalloween okanye ezi eminye imidlalo ekumgangatho ophezulu. Ke sinayo yonke into kwi-cocktail ye-apocalyptic yeenyanga ezidlulileyo.
Ulawulo lwe-protagonist yethu nayo ilula, nangona iyakuthatha Umzuzu othile wokuba yinkosi yokuphatha loo mnqamlezo Unokukhomba ngayo iintloko, umzimba okanye imilenze yabo bahambayo. Abaphambukeli baya kuhamba ngenye indlela kwaye baya kwenza ukutsiba okuqhubekayo bade babethe intloko yakho emnandi. Kungumcimbi wokwazi ukuba ungabahambisa njani ukuze ubaphephe kwaye ubanike okwakho ngesixhobo esinamandla.
Kwaye phantse sinayo etafileni yethu yonke into eyiDon Zombie, umdlalo okhethekileyo kwi-protagonist yayo kunye nobunzima ebunabo, nangona usazi indlela yokuhamba phambi kweZombies ezahlukeneyo kunye neentshaba, ngokuqinisekileyo uya kuba nakho ukuqhubela phambili ukufumana izixhobo ezingakumbi kunye nokubulala iimpazamo ezingcolileyo.
Ngokobuchwephesha ngumdlalo lowo wothuswa yindlela yayo ebonakalayo eyenziwa kakuhle. Ukuqwalaselwa koopopayi babaphambukeli xa bexhonywe entloko kunye noyilo lweempawu ezikhethwe kakuhle ezihlawula yonke ingqalelo yokuba kumdlalo wobusuku. Nangona eyona nto "yoyikisa" ngumoya odalwe ziziphumo zokukhanya, umculo ongasemva kunye nesandi esime esikhumbuza ngenqanawa evela kubaphambukeli, umkhweli wesibhozo.
Un umdlalo we-zombie obizwa ngokuba nguDon Zombie oza kuthandwa ngabalandeli Olu hlobo lwemidlalo kwaye luzisa ixesha elihle lokuzonwabisa nazo zonke ezo zombies, umlinganiswa wethu ophambili kunye nokuvulwa kwezixhobo ezinamandla zokunyusa abahambahambayo ngeembumbulu. Mahala, nangona ikwi-beta, ke yisebenzise.
Umoya omkhulu wenziwe
Isandi esijikelezileyo sishumi
Iimpawu ezintle zamehlo
Ubunzima abulinganiswa kakuhle
Umthuthukisi: Hayi isiThandathu
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Musa ukushiya i-zombie emi kwiDon Zombie